YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, August 17
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/17/2010 1 အကြံပြုခြင်း
17 August 2010 yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/17/20100အကြံပြုခြင်း
မြန်မာ စစ်အစိုးရရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဖိနှိပ်ထားတဲ့ အခြေအနေအောက်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သွားမှာကို အထူးစိုးရိမ်မိကြောင်း ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ လောရင့်စ် ကဲင်နွန်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
၁၉၉၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိသော နှစ် ၂၀ မြောက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ကတိပြုထားတဲ့အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေတာကို ကြိုဆိုပေမဲ့ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေအတိုင်း မဟုတ်ပဲ ဖိနှိပ်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေအောက်မှာ ကျင်းပသွားမှာကို အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ကြောက်လန့်မနေရပဲ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ခွင့် ရထိုက်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုကို ဖော်ဆောင်ဖို့၊ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ကတိပြုထားတဲ့အတိုင်း ကျင်းပဖို့ စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းကြောင်း ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားသွားပါတယ်။
August 17, 2010 Freedom News Group
ကလောမြို့ ရှိ ဗိုလ်မှုးချုပ် မောင်မောင် အေး ၏ အိမ်
မြန်မာ စစ်တပ် အတွင်း ရှမ်းပြည် နယ် တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ဖူးသည့် ဗိုလ်ချုပ် များ ဂိုဏ်းကို
ကလော အုပ်စု ဟု ခေါ် ကြသည် ဟု နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန် မှ မန်နေဂျာ တစ်ဦး က ပြောသည်။
ကလော အုပ်စု ဆိုတာ ကလောမှ မြေရှိ အိမ် ရှိ တဲ့ သူ တွေ ကို ခေါ်တာ ဟု သူက Freedom News Group
ရာသီဥတု သာယာ ကောင်းမွန်ပြီး လုံခြုံ စိတ်ချရသည့် နယ်မြေဖြစ်သည့် ပြင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ အတွက်
နေပြည်တော် မှ ဆိုလျှင် သွား လာရ လွယ်ကူ သောကြောင့် တောင် ပေါ်မြို့ ဖြစ်သည့် ကလော မြို့ ဉ်
လာရောက်အပန်း ဖြေကြ သည် ဟု သိရသည်။ ကလော မြို့ တွင် မြေဈေး များ တက်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ်
များ အိမ် နှင့် မလွတ်ကင်း သည့် ခြံများ ဆိုလျှင် မြို့ ပြင် သို့ ပြောင်းရွှေ့ ပေးရသည် ဟု သိရသည်။
လက်ရှိ ကလော အုပ်စု တွင် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း ၊ သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး ၊ဗိုလ်ချုပ် ခင်ဇော် ၊
ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဖြိုး ၊ဒု – ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မောင် အေး နှင့် ဗိုလ်မှုး ချုပ် မောင်မောင် အေး တို့ က ဟောနန်း ကြီး
များ သဖွယ် ဆောက် လုပ် ထား သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ သည် ရန်ကုန် ၊ပုသိမ် (ချောင်းသာ) ၊နေပြည် တော် အပါအ၀င် ရတနာပုံ မြို့ သစ်
ဉ် ခမ်းနားသော အိမ်များ ဆောက် လုပ် ထားသည်
ရှမ်းပြည်နယ် တောင် ပိုင်း ကလော တွင် အိမ်ရှိ သည့် ဗိုလ်ချုပ် များ သည် ရံဖန် ရံခါ ထို အိမ်များ သို့သွား
ရောက် အပန်းဖြေတတ် သည် ။ ထိုသို့အပန်းဖြေရာ တွင် မိသား စု နှင့် အပန်းဖြေသူများ ရှိ သကဲ့ သို့ ရန်ကုန်
မှာ မော်ဒယ် တစ်ချို့နှင့် အပန်းဖြေသူ များ လည်း ရှိသည် ဟု အလှဖန်တီးရှင် တစ်ဦး က ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦး ၏ အိမ်တွင် အိမ်စောင့် လုပ်သည့် အောင်ပန်း မြို့ သား တစ်ဦးက မင်းသမီး တွေ လား မသိဘူး
လာတယ် တစ်ခါတစ်လေ ဗိုလ်ချုပ် —— က ပြောတယ် ။သူတို့ လာတည်း မယ် လိုလေးသေး မရှိ ပြင်ဆင်ထား
ဆိုရင် အရက်က အစ သွားတိုက် ဆေး အဆုံး အကုန် လုပ်ပေး ထားရတယ် ဟု ဆိုသည်။
အချို့ ဗိုလ်ချုပ် များ က ၎င်းတို့ ၏ ဇနီးများ မသိအောင် က မူ ကလော တွင် အိမ်ဆောက် လုပ်ထား ပြီး
စစ်ဆင်ရေး အတွက် သွား ဖို့ ရှိ သည် ၊ ကျောင်းဆင်း ဟောင်း များ မိတ်ဆုံ ပွဲ ရှိ သည် ဟု အကြောင်းပြ
ကာ မော်ဒယ်(လ) များ နှင့် ချိန်း ဆို ပျော်ပါးသည် ။
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် တနင်္လာ, 16 သြဂုတ် 2010
Transocean နှင့် မြန်မာဘိန်းဘုရင် ဆက်နွယ်မှု အမေရိကန်စစ်ပြီ
သောမတ်စ်မောင်ရွှေ | အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၂ မိနစ်
`မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းများအတွက် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ခံနေရပါသည်ဟု ထရန်စ်အိုးရှင်း (Transocean) အမေရိကန် ဆွစ်ဇာလန် ဖက်စပ် ရေနံတွင်းတူး လုပ်ငန်းက ထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်သည်။ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ တွင် ရေနံတွင်း တူးစင် ပေါက်ကွဲခဲ့သည့်အတွက် ပြည်သူလုထုက အသေအချာ စောင့်ကြည့်နေကြချိန်တွင် ထိုသို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် သတင်းပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် သမိုင်းတွင် အဆိုးဝါးဆုံး ရေနံယိုစိမ့်မှုကြီးဖြစ်သော ဧပြီလအတွင်း ပေါက်ကွဲမှု ကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ဘီပီ ကုမ္ပဏီက ငှားရမ်းထားသော အဆိုပါ ထရန်စ်အိုးရှင်း ကုမ္ပဏီသည် စတော့ဈေးကွက် ကော်မရှင်ရုံး (SEC) သို့ နောက်ဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် 10-Q ပုံစံစာရွက်တွင် ထိုသို့ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာန နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) ၏ဆင့်စာကို `မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောက်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက်´ မကြာခင်က လက်ခံရရှိကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ ဤပုံစံစာရွက်ကို သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ကတင်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထရန်စ်အိုးရှင်း အတ္တလန္တိတ် ကုမ္ပဏီ၏ တဝက်တပျက် ရေတွင်နစ်မြုပ်ရေနံတူးစင် Actinia။ လွန်ခဲ့သော ဆောင်းဦးပေါက်က အဆိုပါရေနံတူးစင်ကို မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် ရေနံ တူးဖော်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ CNOCC နှင့် စင်္ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော China Focus Development ကုမ္ပဏီတို့ စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုသို့ ငှားရမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ စင်္ကာပူမှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီကို စစ်အစိုးရ၏လက်ရင်းလူယုံတဦးဖြစ်ပြီး ငွေမည်းခဝါချသူ တဦးဟု နာမည်ကြီးနေသည့် စတီဗင်လော ခေါ် ထွန်းမြင့်နိုင်က ပိုင်ဆိုင်သည်။ (ဓါတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ)
10-Q ပုံစံသည် ၃ လတခါ SEC ရုံးသို့ တင်သွင်းရခြင်း ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်တင်သွင်းရသော 10-K ပုံစံ တွင်ပါသော အချက်အလက်များကို ပင်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် အဆိုပါ ၃ လပတ် အစီရင်ခံစာတွင် ပါသော အချက်အလက်များသည် သာမန်အားဖြင့် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားခြင်းမျိုး မရှိဘဲ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာများမှာလည်း သာမန်အားဖြင့် စာရင်းစစ်ဆေးပြီးသား မဟုတ်ပါ။
အမေရိကန်အစိုးရ၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို အရေးယူအကောင်အထည်ဖော်ရသည့် ဌာန၏ ဆင့်ခေါ်စာမှာ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနက မေလတွင် ဤအကြောင်း ပထမဆုံး သတင်းရေးသား ဖော်ထုတ် တင်ပြခဲ့ပြီးနောက် ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထရန်စ်အိုးရှင်းက အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့ တင်ပြသည့် အဆိုပါ အစီရင်ခံချက်တွင် သူတို့ကုမ္ပဏီကို ရေနံတွင်းတူးရန် အတွက် စတီဗင်လောက ဖက်စပ်ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတခုက လွန်ခဲ့သောနှစ်ကငှားရမ်း ခဲ့ကြောင်းရေးသားတင်ပြထားသည်။
စတီဗင်လောသည် စစ်အစိုးရ၏လက်ရင်း လူယုံစီးပွားရေးသမားတဦးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရနှင့် လေ့လာသုံးသပ်သူများက မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးငွေမည်းခဝါချသူတဦး ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားခံရသူဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနဝက်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားချက်အရ `OFAC ရုံးဆင့်စာစီမံခန့်ခွဲရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့သည်´ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုအရေးယူအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် `အဆိုပါ ဒဏ်ခတ်မှုကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည်ဟုယူဆပါက လိုအပ်သည့် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို တောင်းယူပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း´ ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ ဆင့်စာကိုအကြောင်းပြန်ရန်မှာ မလုပ်မနေရ မဟုတ်သော်လည်း ဆင့်စာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အမိန့်စာချွန်ကို လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် အလွန်ကြီးလေးသော ဖောက်ဖျက်မှုတခုဖြစ်သည်။
နာမည်ပျက် စာရင်းသွင်းထားခြင်းခံရသော မြန်မာ့ မူးယစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်း မိသားစုကြီးတခုနှင့် ထရန်စ်အိုးရှင်း ကုမ္ပဏီတို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် အကြောင်းရေးသားထားသည့် မဇ္ဈိမ သတင်းကို နယူးရောက်တိုင်း သတင်းစာကြီး၏ မျက်နှာဖုံးသတင်းအဖြစ် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အီရန်၊ နော်ဝေ နှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံတို့မှ ထိုကုမ္ပဏီ၏အလားတူ သင်္ကာယနံ့မကင်းစရာ လုပ်ငန်းများကိုလည်း အသေးစိတ် ရေးသားထားသည်။
ဤသို့ ထရန်စ်အိုးရှင်း၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တိတ်တဆိတ်လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းများအကြောင်း ဖော်ပြတိုင်တန်းသည်ကို အမေရိကန်အစိုးရက အရေးတယူကိုင်တွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည့်အတွက် ကျေနပ်အားရကြောင်း ရွှေဂက်စ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ နိုင်ငံတကာ ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ရေးမှူး နှင့် မြန်မာ့သဘာဝ သယံဇာတ ကဏ္ဍစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတဦးဖြစ်သူ ဦးဝမ်းအောင်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ရွှေဂက်စ်အဖွဲ့သည် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများ၏ ဂေဟစနစ်ကို ပျက်ပြားစေသော ကမ်းလွန် ရေနံတွင်းတူး လုပ်ငန်းများအား ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေသည့် မြန်မာ့အတိုက်အခံ အဖွဲ့များ၏ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
သူတို့တူးဖော်နေသော မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ရှိ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်ယူပိုင်ဆိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ နာမည်ပျက်နှင့် လော မိသားစုက ပိုင်ဆိုင်သည်ကို `ထရန်စ်အိုးရှင်း ကမသိပါဟု ပြောဆိုသည်ကိုလက်မခံနိုင်ဖွယ်မရှိ´ ကြောင်း သူက ယုံကြည် သည်။ စတီဗင်လော ခေါ် ထွန်းမြင့်နိုင်၊ သူ၏စင်္ကာပူသူ ဇနီး၊ သူ့ဖခင် ဘိန်းဘုရင်လော်စစ်ဟန်တို့အားလုံး သည် OFAC မှ နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းထားခံရသူများ ဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းကိုတရားဝင်အား ဖြင့် `အထူး သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်း ခံရသောနိုင်ငံသားများ´ (SDN) ဟု ခေါ်သည်။
အဆိုပါ သုံး ယောက်စလုံးသည် ဥရောပသမဂ္ဂ က ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေး ယူခံရသော စာရင်းတွင် ပါဝင်သူများလည်း ဖြစ်သည်။
ထရန်စ်အိုးရှင်းအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ က SEC သို့ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က တင်သွင်းခဲ့ သော 8-K ပုံစံတွင် ရေတွင်တဝက်တပျက်နစ်မြုပ်တူးဖော်ရသော သူတို့ပိုင် ပနားမားမှတ်ပုံတင် Actinia ရေနံတွင်း တူးစင်ကို မြန်မာ့ရေပိုင်နက်တွင်း အောက်တိုဘာမှ ဒီဇင်ဘာ ကာလအတွင်း တူးဖော် လုပ်ကိုင်လုပ်ရန် အတွက် တရုတ်အစိုးရပိုင်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော CNOCC က ငှားရမ်းခဲ့ကြောင်း ရေးသား တင်ပြထားသည်။
CNOCC ဝက်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားချက်အရ ကုမ္ပဏီပိုင် မြန်မာ့ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအစုရှယ်ယာ အားလုံးကို (ယခင်က Golden Aaron ဟု သိရှိကြသည့်) China Focus Development နှင့် China Global Construction တို့နှင့်အတူပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ CNOCC မှာ လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်သူ အဖြစ်သာ ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ China Focus Development ကုမ္ပဏီမှာ စင်္ကာပူ မှတ်ပုံတင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပြီး တဦးတည်းသော အစုရှယ်ယာရှင်များမှာ စတီဗင်လော နှင့် သူ့ဇနီး Ng Sor Hong ခေါ် Cynthia Ng တို့ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့၏ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုစာရင်းတွင် Ng Sor Hong ကို အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) အဖြစ်ဖော်ပြထားပြီး OFAC စာရင်းပါ မြန်မာ နိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ် ပတ်သက် နေသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်းတွင် လော မိသားစုထိန်းချုပ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီတဒါဇင်ကျော်အနက် ဤကုမ္ပဏီလည်း တခုအပါအဝင်လည်း ဖြစ်သည်။
လော ၏ ဖခင် မြန်မာတရုတ်ကပြား လော်စစ်ဟန် ခေါ် လော်ရှင်းဟန်မှာ ၁၉၇ဝ စုနှစ်များအတွင်း အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကောင်းဆုံး လက်နက်တပ်ဆင်ထားသည့် ဘိန်းမှောင်ခို ဂိုဏ်းကြီးတဂိုဏ်းအဖြစ် အမေရိကန် မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုတိုက်ဖျက်ရေး လေ့လာဆန်းစစ်သူများက ယုံကြည်နေသည့် ဂိုဏ်းကြီးကို ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် နားလည်မှုရပြီးနောက် လော်စစ်ဟန်သည် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကာ သူရရှိထားခဲ့သော မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ အမြတ်ငွေများဖြင့် အခြားစီးပွားရေး နယ်ပယ်များကို ချဲ့ထွင်လုပ် ကိုင်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများကို အမေရိကန်အစိုးရက ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီး လော်စစ်ဟန် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် မိသားစုပိုင် အေးရှားဝေါလ်ဒ် ကုမ္ပဏီ၏ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်။
စတီဗင်လောသည် အေးရှားဝေါလ်ဒ် ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်၏ အကြီးမားဆုံး ကုမ္ပဏီစုကြီးတခုကို အဓိကမောင်းနှင် လည်ပတ်နေသူ တဦးဖြစ်သည်ဟုလည်း ယုံကြည် ယူဆရသူ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတခုကို လည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသည့်အပြင် စီးပွားရေးအရအကျိုးအမြတ်များလှသည့် အဝေးပြေးလမ်းမကြီး လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများနှင့် ရန်ကုန်ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ် တည်ဆောက်ခြင်း အပါအဝင် ရန်ကုန်လေဆိပ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကဲ့သို့ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းကြီး အများအပြားကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာနက ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေငြာချက်အရ `စတီဗင်လောနှင့် လော်ရှင်းဟန် တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့ သည်သာမက တရားမဝင် လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည့် ရာဇဝင်မှတ်တမ်းရှိသည်´ ဟု ဆိုသည်။
`ဘိန်းဖြူလုပ်ငန်း၏ ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီး´ သိရှိကြသော လော်ရှင်းဟန် သည် ၁၉၇ဝ စုနှစ်များ အစောပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့အဓိက ဘိန်းဖြူရာဇာကြီးများအနက် တဦး ဖြစ်သည်။ စတီဗင်လောသည် သူ့ဖခင်၏ မူးယစ်ဆေးဝါး အင်ပါယာတွင် ၁၉၉ဝ စုနှစ်များအတွင်းက ပါဝင်လာခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များအနက် တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်´ ဟု ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်တွင် ရေးသားထားသည်။
ဒဏ်ငွေ အကန့်အသတ်သာ ချမှတ်မည်ဟု ထရန်စ်အိုးရှင်းက ခန့်မှန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းများနှင့် အီရန်တွင်ရှိသော အလားတူလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ OFAC ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ထရန်စ်အိုးရှင်းက သူ SEC သို့တင်ပြသောပုံစံတွင် `ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများ၊ လုပ်ငန်း အကျိုးအမြတ်များ တို့ကို ဖော်ပြထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏တစုတစည်း တည်းသော ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ ကြေညာလွှာအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများမှ တာဝန်ရှိသည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့လျှင်ပင် ကြီးမားသော ထိခိုက်နိုင်လောက်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ မရှိနိုင်ဟု ၎င်း၊ ပေးရန်တာဝန်များ ပေါ်ပေါက်မည် မဟုတ်ဟု၎င်း ထင်မြင်ယူဆပါသည်´ ဟု ရေးသားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများနှင့် လောမိသားစု မူးယစ်ဂိုဏ်းအပေါ် ချမှတ်ထားသော ဒဏ်ခတ်မှုများကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့ဖွယ် ရှိသည့်အတွက် ထရန်စ်အိုးရှင်း ကုမ္ပဏီကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် အပြစ်ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဦးဝမ်းအောင်က ပြောသည်။
`ထရန်စ်အိုးရှင်းက ဒီအန္တရာယ်က မရမက ရုန်းထွက်မှာဘဲဆိုတာတော့ ကျနော်သေချာပေါက် ပြောရဲတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ကောက်ဝတ်လေးကို တချက်လောက် ရိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ အာရှတိုက်ရဲ့ နာမည်အပျက်ဆုံး မူးယစ်ဆေး မှောင်ခိုမှုကရတဲ့ ငွေမည်းခဝါချသူ မိသားစုတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ နိုင်ငံစုံ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကို အသေအချာ သတိပေးနိုင်လောက်တဲ့ ပြင်းထန် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုး ချမှတ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်´ ဟု သူက မဇ္ဈိမ ကိုပြောသည်။
`ထရန်စ်အိုးရှင်းကုမ္ပဏီကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်ကုမ္ပဏီ တွေဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်ဆိုတာကို အသေအချာစောင့်ကြည့်လေ့လာဘို့ အမေရိကန်အစိုးရကို သတိပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားစေသင့်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ပင်လယ်ရပ်ခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရာမှာ ပိုပြီးပွင့်လင်းမြင်သာအောင်လုပ်ဘို့ ဘဏ္ဍာရေးဌာနနဲ့ SEC နှစ် ခုစလုံးက နိုင်ငံစုံ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေကိုဖိအားပေးသင့်တယ်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီခွဲတွေနဲ့ လျှို့ ဝှက်စာချုပ်တွေကိုသုံးပြီး အနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီကြီးတွေက ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုကို မသိကျိုး ကျင်ပြုတာကို မကြာခဏ ခွင့်ပြုထားကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေ တကယ်တမ်း ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သူတို့ရဲ့ အစုရှယ်ယာရှင်အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေက မသိကြဘူး´ ဟု သူက ပြောသည်။
ဤသတင်းဆောင်းပါးရေးသားပြီးချိန်တွင် မဇ္ဈိမ က ထရန်စ်အိုးရှင်းကို၎င်း၊ OFAC ကို၎င်း၊ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ ဆက်သွယ်၍မရခဲ့ပါ။
ရေနံတူး ကုမ္ပဏီ၏ မရေမရာ ငြင်းဆိုချက်ကို စိန်ခေါ်ခြင်း
နယူးရောက်တိုင်းသတင်းစာက ဂျူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က ရေးသားဖော်ပြရာတွင် သူတို့နှင့် CNOCC တို့ချုပ်ဆိုသောစာချုပ်တွင် စတီဗင်လောနှင့် သူ့ဖခင်တို့၏နာမည်ကို ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် အမေရိကန်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်းဖြင့် ထရန်စ်အိုးရှင်းက သတင်းစာတိုက်သို့ ပေးပို့သော စာတွင်ရေးသားထားကြောင်း ဖော်ပြသည်။
သို့သော် စတီဗင်လော၏ဇနီး Ng Sor Hong နှင့် သူဦးဆောင်နေသည့် China Focus ကုမ္ပဏီ အမည်ကို ထရန်စ်အိုးရှင်းနှင့် ချုပ်ဆိုသောစာချုပ်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားခြင်း ရှိမရှိကို အဆိုပါ စာတွင် ငြင်းဆိုခြင်း အတည်ပြုခြင်းမရှိပါ။
ထရန်စ်အိုးရှင်း၏ အဆိုပါစာသည် လိမ်လည် လှည့်စားထားကြောင်း အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ဦးဝမ်းအောင်က ပြောသည်။ `နယူးရောက်တိုင်း သတင်းစာမှာ ရေးထားတာ CNOCC နဲ့ချုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စာချုပ်မှာ စတီဗင်လောနဲ့ သူ့အဖေနာမည်တို့ မပါဘူးလို့ဘဲ ထရန်စ်အိုးရှင်း ကငြင်းတဲ့အကြောင်း ရေးထားတာ။ ဒီစာချုပ်မှာ လောရဲ့ဇနီး Ng Sor Hong နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်ကိုလုပ်ကိုင်ရာမှာ CNOCC နဲ့အတူပူးတွဲပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ သူ့ ကုမ္ပဏီနာမည်တို့ ပါမပါကိုတော့ ဖော်ပြမထားဘူး´ ဟု သူကပြောသည်။
`ရေနံတွင်းတူးတဲ့နေရာက ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခွင့်ကို ဘယ်သူတွေအတူပူးတွဲပိုင်ဆိုင်တာ စာ ချုပ်မှာ ဖော်ပြထားတာမရှိဘူးဆိုတာ လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါဘူး။ ဒီစာချုပ်မှာပါတဲ့ စာသား အတိ အကျကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဘို့ အမေရိကန်နဲ့ ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရတို့က ထရန်စ်အိုးရှင်းကိုဖိအား ပေးသင့်ပါတယ်´ ဟု ဦးဝမ်းအောင် ကပြောသည်။
နယူးရောက်တိုင်းသတင်းစာသို့ ကုမ္ပဏီကပေးပို့သော စာတွင် နားလည်ရခက်သော အချက်တခုလည်းပါသည်။ `အမေရိကန်၏ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားမှုကို လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည့် မည့်သည့် ထရန်စ်အိုးရှင်းကုမ္ပဏီခွဲမျှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေခြင်းမရှိပါ´ ဟုရေးသားထားသည်။ ယခင်က အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်သော ထရန်စ်အိုးရှင်းသည် ယခုအခါ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်သော ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် ဌာနချုပ်ပြုလုပ်ထားသည်။
(အဆိုပါ ဌာနချုပ်တွင် ဝန်ထမ်း ၁၂ ဦးသာရှိသည်။) ထို့ပြင် Actinia ရေနံတွင်းတူးစင်ကို လည်း ပနားမားနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး သူတို့အနေဖြင့် အမေရိကန်၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ကိုလိုက်နာရန်မလိုဟု ငြင်းဆိုလိုပုံရသည်။ သို့သော် OFAC ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လိုက်ခြင်းက အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့် ထိုသို့စဉ်းစားသုံးသပ်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြသနေသည်။
မြန်မာနှင့်အီရန်တို့အပေါ်ချမှတ်ထားသည့် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုကို ဖောက်ဖျက်သည့် အတွက် အခြားဆွစ်ဇာလန်ကုမ္ပဏီတခု ဒဏ်တပ်ခံရခြင်း
အီရန်၊ မြန်မာ၊ လစ်ဗျား၊ ဆူဒန်၊ ကျူးဘား နှင့် ယခင်ချားလ်စ်တေလာ၏လိုင်ဘေးရီးယား အစိုးရဟောင်းတို့အပေါ် ချမှတ်ထားသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့သည်ဟု OFAC ရုံးမှ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို အကောင်အထည်ဖော်သူများက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အတော်အတန် ကြီးမားသောလုပ်ငန်းပမာဏ ရှိသည့် အဓိကဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်ကြီးတခုဖြစ်သော Credit Suisse သည် မကြုံဖူးလောက် အောင်များပြားသည့် ဒဏ်ငွေဖြစ်သော အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃၆ သန်းကိုပေးပါမည်ဟု လွန်ခဲ့ သောဒီဇင်ဘာလက သဘောတူခဲ့ရသည်။
ထိုသို့သဘောတူညီချက်ရရှိကြောင်းကြေငြာရာ တွင် အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ် အဲရစ်ဟိုလ်ဒါ (Eric Holder) က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခံ ထားရသော နိုင်ငံများကို `အဆိုပါလူဆိုးနိုင်ငံများ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရရှိစေရေးအတွက် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းပုံစံတခုကို အသုံးပြုကာ´ ဒဏ်ခတ်မှုများကျော်လွှားနိုင်ရေးအတွက် တရားမဝင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်´ ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါဖောက်ဖျက်မှုအများစုကို Credit Suisse ကကျူးလွန်ရာတွင် အီရန်နိုင်ငံနှင့်လုပ်ဆောင် သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သာ ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန်အစိုး ရ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ပြောဆိုသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့လည်း အလားတူ ငွေများ တရား မဝင် အကြိမ် ၃ဝ မျှ ပို့ပေးခဲ့ကြောင်းဖြင့် ဘဏ်က အစိုးရနှင့်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တွင် ဖော်ထုတ်ဝန်ခံထားသည်။
လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂ဝ ကျော်အတွင်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရ သောနိုင်ငံများသို့ ရံပုံငွေစုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလျံမျှ တရားမဝင်ပို့ပေးခဲ့သည် ဟုလည်း Credit Suisse ဘဏ်ကြီးက ဝန်ခံထားသည်။
တာမွေသား Tuesday, August 17, 2010 မြန်မာပြည်မှပေးစာ
ခင်ဥမ္မာ Tuesday, August 17, 2010 သူ့အတွေး သူ့အမြင်
ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် သီတဂူ တရားပွဲ အင်းစိန် (ဗဟို) ထောင်တွင် ကျင်းပမည်
သီတဂူ ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင် ဉာဏိဿရ (Ph.D,D.Litt) သည် ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အင်းစိန် (ဗဟို) ထောင် အတွင်း တရား ဟောပြောမည် ဖြစ်ကြောင်း သီတဂူ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ သာသနာပြု အဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးဟန်က ပြည်တွင်းထုတ် မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်သို့ ပြောကြား ကြောင်း သတင်း ရရှိ ပါသည်။"ဓမ္မ ကုသိုလ် အဖြစ် ဆရာတော်ကြီးက ဦးဆောင် လုပ်တာပါ၊ အကျဉ်း ဦးစီး ကလည်း ခွင့်ပြုတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ အကျဉ်းထောင်က ထောင်သား အားလုံးကို ၉,၀၀၀ လို့တော့ စာရင်း ရထားတယ်၊ ထမင်းကျွေးမယ်၊ အင်္ဂလိပ် ဆေးဝါး၊ မြန်မာ ဆေးဝါး၊ ဘာလချောင်ကြော်၊ သရက်သီးသနပ်၊ မုန့်ထုပ်တွေ၊ နောက် မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ စတဲ့ သူတို့ လိုအပ်တဲ့ အသုံး အဆောင် ပစ္စည်း လေးတွေ ဝေမယ်။ သီတဂူရဲ့ ရန်ပုံ ငွေနဲ့ လှူမှာပါ၊ နောက် ဒါကို သိလို့ သီးသန့် လှူကြတဲ့ အလှူရှင် တွေလည်း ပါတယ်။ သိန်း ၅၀၀ ဖိုးလောက် ရှိမယ်၊ နေ့လယ် မှာ ဆရာတော်ကြီးက တရားဟောပြီး ညနေစာလည်း တစ်ခါ ထပ်ကျွေးဦးမယ်"ဟု ဦးဟန်က ပြောကြားကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
၁၆ . ၈ . ၂၀၁၀